Fogging masisitimu anoshandiswa mukuita kusawonda yakaoma fog nzira inogona kushandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana. Parizvino, apo isu tiri kufunga nzira inobudirira yekuuraya hutachiona makamuri, mhinduro dzakadai dzinowanzofungwa mukati mevaya vane hutano hwevamwe. Midziyo iyi inogona kushandiswa zvinobudirira munzvimbo dzebasa kana panguva yekuungana kwemhuri, zvakare mubindu. Masisitimu ekukuvadza akagadzirwa neakanyanya kunaka mhando zvinhu, uye nemazizi anoshandiswa anoonekwa nekukwira kwakanyanya.
Dhawunirodha makatalogu uye runyorwa rwemitengo >>
Fogging masisitimu ekudzivirira muCity Fomu Rokugadzira Design
Midziyo inokanganisa irikuisa nzvimbo neyakaoma nzira yekukanganisa inoshanda nekuparadzira hutsi pamwe ne disinfectant. Kugadzirira kwakadaro kune mhedzisiro inouraya mabhakitiriya nemavhairasi aripo munharaunda yedu. Izvo zvakakonzera hove yakaoma ine yakakwirira inopinda midziyo uye yakachengeteka kune iyo nzvimbo iyo yaunosangana nayo.
Kutenda nekukwanisa kushandiswa kukanganisa masystem pasi pemamiriro ese ezvinhu, i.e. on nzvimbo, w mapaki uye mukati mezvivakwa, uye nekuda kwekugona kushandisa mishonga yakakodzera mishonga, zvishandiso izvi zvinoshandiswa zvakanyanya.
Masisitimu emazuva ano ekutadzira anoshandisa kune disinawon kugadzirira kwemakemikari muchimiro chedense aerosol, iyo inobvumira disinawon, ndiko kuti, kururamisa kwakakosha kuderedza huwandu hwepathogenic microorganisms mumhepo inowanikwa.
Kubviswa kwehutachiona hwehutachiona hunoshandisa fogging system zvakare kunogoneka muzvipatara, makiriniki ekurapa, mudzimba nekufambisa kwevanhu.
Kuve nezvinongedzo mundangariro Chief Sangency Inspectorpakudzivirira kupararira kweCOVID-19, tinopa mhinduro dzemazuva ano dzekuwedzera kuchengeteka munzvimbo yebasa.
yakachengeteka uye inoshanda disinawoniti yenzvimbo uchishandisa akaoma fog nzira
zvakananga zvekudzivirira matanho: masks, visors
mvura disensers: akamira uye madziro akaiswa
kuongororwa kwenzvimbo uye kukura kwekuyerera kwakanyanya kwevashandi nevatengi kudzikisa kutyisidzira kwakakonzerwa neCOVID-19 denda.
Zvinotsanangurwa mhinduro maererano disinfection zviteshi, nzvimbo dzinopatsanura uye zvekuzvidzivirira nazvo pachako zvinoshanda uye zvine simba panguva imwe chete.
Onawo: Nyowani pane zvekupa! Disinversal zviteshi - hutsanana hwemaoko kubva kuMETALCO
Space disinitness neyakaoma mhute nzira inobvumira disinawiti yemaficha uye mweya. Inoitiswa nechikwata chakakodzera chevashandi nekushandiswa kwemichina yakasarudzika uye kugadzirira. Iyi nzira inobvumidzwa kushandiswa munzvimbo dzeveruzhinji, zvifambiso zvevoruzhinji, mahofisi, zvikoro, kindergartens uye zvipatara.
Dry mist disinfection inzira inokurumidza uye yakachengeteka yekuuraya hutachiona nzvimbo, yakavakirwa pane yakagadzirirwa nzira yekubika, ine mvumo yekushandiswa uye yakasimbisa antiviral chiitiko, zvakare zvinopesana neCOVID-19.
Tichaongorora chimiro chinoshanda cheichi chako
Isu tichagadzirira nhungamiro dzekuyerera kwakanyanya kwevashandi nevatengi uye nekuderedza njodzi panguva yedenda;
Isu tinoisa ruzivo rwedu pamakore mazhinji ebasa kumakambani anobva kuHoReCa indasitiri, nzvimbo dzekudya, uko kuyerera kwevanhu nezvigadzirwa iri paramende yakakosha;
Pahwaro hwekuongorora, isu tichaisa mhinduro chaiyo nezve disinfection zviteshi, nzvimbo dzinopatsanura, nhumbi dzekudzivirira pachako, kutaurirana kwekuona
KUDZIDZWA KWAZVO ZVINONYORWA NADHY MIST METHOD
UNIQUE SOLUTION kubvumidza disinawon yezvipenga nemhepo;
Kuitwa na ZVINOKOSHA TIMA uchishandisa SPECIALIST MACHINES
YAKADZIDZWA MITSI YOKUSHANDA : munzvimbo dzinowanikwa veruzhinji, zvifambiso zvevoruzhinji, mahofisi, zvikoro, kindergartens, zvipatara;
KUPONESA kuzadza kwehunhu uchishandisa michina yedu (100 m3 inotora approx. 6 min)
INNOVATIVE uye YAKachengeteka DZIDZISO, yakavakirwa pane yakagadzirirwa nzira yekudyara, isina aldehydrate, hapana chlorine, isina chepfu zvinhu;
ICHEMA INE ZVINHU ZVINOGONESESA UYE KUSVIRWA DZVIMBO DZESHURE inogamuchirwa kuti ishandiswe
NYORAI CHINANGWA CHETE
Inosangana nezvinodiwa EN14476 mune yekurapa kurwisa hutachiona hwehutachiona husina kuvharidzirwa (i.e.k. Norovirus, Poliovirus, Adenovirusuye casing (Vacciniavirus) iyo inosanganisirawo COVID-1
Chigadzirwa CHINONYORWA SEZVINOGONESESA BHAIBHERI
Mvumo yekutengesa ye biocidal chigadzirwa: kwete. PZH chitupa Nha .BK / K / 7420/18/0863
Broad Biocidal Spectrum: Iyo inoparadza mabhakitiriya, mavairasi, spores-spores, fungi, fung
chiito: Kuzere-kuratidzwa disinfection, Kushambidza, Kushambidza, Deodorizing, Mhepo freshening, Kubvisa Stain
inobvisa: Tsvina, Guruva, Guruva, Sediments, Zvisikwa zvinosvibisa, Microorganisms, Tachiona
Zvakanakira uye zvakanakira mushandisi
KUSVIRWA kwemushandisi, kwakavakirwa pamhando yakasarudzika, bodegradable formula isina doro, hapana aldehydes, hapana chlorine, hapana zvinhu zvine chepfu.
NON-FLAMMABLE - isina-anopisa mvura-yakavakirwa dhizaini inobvisa njodzi yemoto.
ZVINOPINDIRA - KUSATSIGIRA zvinhu zvakawanda: mapurasitiki, simbi zhinji dzinosanganisira aluminium, gasketi regabha, kupenda pendi, machira ...
MULTI-TASK - kugeza maoko, kupuruzira, kupukuta, maputi anoshandisika, kugeza, kufushira
WASHES uye CLEANERS - zvinobudirira zvinobvisa makwapa nekusvibisa kwehupenyu: inobvisa chakuvhe, fungi, guruva, mafuta, mafuta, mafuta ane mafuta kubva kumusoro uye makapeti, kurutsa, tsvina, ropa, chikafu chiri kuora, tsvina yemarara, marara, nezvimwe.
Inogadzira MUFANANIDZO FOAM mune iyo foam lance, iyo inotambanudza chiito chacho pane nzvimbo yakatarisana nemumatanho
100% chokwadi chekusakwana - chakaedzwa zvichienderana nehuwandu hweEuropean EN. (* tafura)
ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA - Iyo yakanyanya kuwanda biocidal spectrum munguva ipfupi kusvika maminetsi gumi neshanu (Bacteria, Virusi, Fungi, Spores)
FAST BIOCIDAL ACTION - Inoparadza Legionella Pneumophila mukati meminiti imwe maererano neEn 1, EN 1040.
CHINODZIVIRA kuumbwa kwefungus, kuumbwa uye mabhakitiriya, nekuti inoparadza spores (spores) - haingodziviriri chete kukura kwehutachiona, asi zvakare inoparadza yavo majini zvinhu.
INOBvisa ZVISINA KUVARA - Inobvisa zvachose hwema hwusingafadzi, hwema husingafadzi hwetsvina uye inosiya munhuwi mutsva.
NANOCLEAN AIR GDU kugadzirira (VERENGA KUTI USHURE) isiri-inopisa, mvura yakavakirwa.
Iyo gadziriro ndeye biodegradable, isina-kune chepfu, isina-carcinogenic, haina allergens uye haisi kutsamwisa.
Iyo 5% yekugadzirisa mhinduro haina kunyorwa seyakaipisa maererano neChipiri 1272/2008 / EC.
Ibva kure nevana. Verenga iyo SDS usati washandisa.
Akasarudzika maitiro ezvigadziriso zvakavakirwa pasirivheri nemhangura nanoparticles.
ZVINOKOSHA ZVINOKOSHA - Iyo yakanyanya kuwanda biocidal spectrum munguva ipfupi nguva kusvika pamaminetsi gumi nemashanu.
(Hutachiona: 1 ÷ maminetsi mashanu, maVirusi: maminetsi mashanu, Fungi: 5 ÷ maminetsi gumi nemashanu, Spores: maminetsi mashanu, Mycobacteria: maminetsi mashanu)
FAST BIOCIDAL - inobvisa Legionella Pneumophila mabhakitiriya muminiti 1 zvichienderana ne EN 1276.
RINONZESA kuwanda kwebhakitiriya, fungi uye mapundu, nekuti haisi kungodzivirira kukura kwehutachiona, asiwo inoparadza zvinhu zvavo zvekuzvarwa. KUVEDZWA - KUVEDZWA zvinoenderana nezvakawanda zveEuropean EN mazinga.
INODZORA HUNHU HUSINGANASHAMWARI - inobvisa zvachose munhuwi usingafadzi wehowa uye nekunhuhwirira kusingafadzi kwetsvina.
KUSVIRA kwemushandisi, kwakavakirwa pamhepo yakachengeteka formula, hapana aldehydes, hapana chlorine, hapana asidhi.
NON-FLAMMABLE - kuumbwa-kwakavakirwa mvura kunobvisa njodzi yemoto.
KUDENGA -KUSVIRA - kugeza maoko, kupuruzira, kupukuta, mapundu anoshanda, kunyudza, kufefita.
WASHESI NEZVAKACHENESWA - zvinobudirira kubvisa tsvina uye zvisikwa zvakasikwa: inobvisa chakuvhe, fungi, guruva, mafuta, mafuta,
zvinonhuwira zvemafuta kubva upholstery uye makapeti, kurutsa, ndebvu, ropa, kuora chikafu, tsvina organic, nezvimwe.
Iyo ine PZH inobvumidzwa uye PERMIT yekutengesa mune yakagadzirwa biocidal.
clostridiumntyile disinfectionizvo zvinopa kusakwanakwakawanda sei mhepo yemhepo disinitnessizvo zvinoreva kuti izwi disinawonchii chinonzi disinfectionchii chinonzi disin kusavimbika uye kwakakosha sei kudzivirira kupararira kwechirwerechii chinonzi disinfectionchii chinonzi disinfection, disinfestation, tsvinachii chinonzi disinfection uye chinonzi deratizationchii chinonzi disinfection uye chii chine basachii chinonzi disin kusavimbika uye zvinobatsira sei kudzivirira kupararira kwechirwerechii chinonzi disin kusafa uye chii basa raro mukudzivirira kupararira kwechirwerechii chinonzi disinfection uye sterilizationchii chinonzi disinfectionchii chinonzi disinfection mune cosmeticschii chinonzi disin kusagadziriswa kwebvudzichii chinonzi disinawonchii chinonzi disinfection uye chinobatsira sei kudzivirira kupararira kwechirwerechii chinonzi disinawonzvinorevei kuurayakusarongekadisinawon 24kusawoneka uye kusarudzikadisinitness shangudisinawon of shangu mushure me mycosisdisinawon of lumpex shanguchii chinonzi disinfectiondisinawon kuti chiidisinawon kuti chii uye kuti sei zvakakosha kudzivirira kupararira kwechirwerechii chinonzi disin kusafa uye chii basa raro mukudzivirira kupararira kwechirweredisinawon zvazvinorevadisinfection iyo inobvisadisinawon nei isina doro rakavakirwatsanangudzo disinfectionkusawonekana uye kusawiriranadisinfection uye kusawonekera muchena salondisinfection uye kusawonekera muchena salon pdfdisinfection kusvika rinhidisinitness yezaidisinawondisinawon izvo zvine basadisinfection iyo yakakosha kudzivirira kupararira kwezvirweredisinfection iyo yakakosha kudzivirira kupararira kwezvirweredisinfection iyo yakakosha mukudzivirira kupararira kwechirweremamiriro emweya disinawonair conditioning disinawonse chero vanganidisinawon of quilts muhotera zvese vanganidisinitness ye huku coopdisinality yeashure yekuhuku coopdisinitness yefuratidisinawon zvishandisobhutsu disinfectionozone disinfectionozone disinfection chii ichokubhedhenura disinfectiondisinawon mushure memapundudisinawon mushure mekufadisinication mushure memufipost-mortem disinfectiondisin kasitiWashing Machinedisinfecting zvinhudisinversal ruokoronda disinawonronda disinawonganda disinfectiondisinality yematsimeyakadzika disinawonyakadzika disinawon ne disodium hypochloritekuomesa mhu disinfectionThermal disinokufa mangani madhigiriiinopisa disinawoniti yemvura inopisa kuisa senge kazhinjikupisa mafuta disinfection kazhinjidisinitness yemvuradisinawon yemvura yekunwachidhiza dhizainiecolab disinawonzvinoda marii kubulala majoniyakawanda sei disinitness yefuratiimarii yemubhedha disinfection inodhurayakawanda sei disinawon kwemakadhi ekutengainotora nguva yakareba sei mamiriro emhepo disinfection anotorakusawoneka kunoratidzika seikuti disinfection yefurati inoratidzika seikukosha kwekuuraya hutachiona mukudzivirira kupararira kwechirwerekugeza uye kubvisa maoko maokoDemodex disinfectionrondedzera kukosha kwekubvisa maturu nematuru nemidziyoparvovirosis disinfectionmhepo yekuisa disinawon posterkubhedhenura disinfectionmycobacteria, disinfectiontarisa izwi rekusawoneka mune iro raripo ruzivo uye nyora zvazviritsvina uye kusarongekakuoma disinawonhove yakaomascabies disinitness yefuratiterm disinitness chii ichoizwi rekusakwana, iro rakakosha mukudzivirira kupararira kwechirwerefoggingfogging mafungirofogging makamurikupisa kwemafutafogging ulvulv fogging mutengofogging ulv ongororofogging Warsawkudzvinyirira kwakanyanya